Ungayisebenzisa kanjani isu lezinhlaka eziningi lapho uhweba i-FX | I-FXCC Blog
Aug 12 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko, Amazwana eMakethe • Ukubuka kwe-1220 • Amazwana Off kokuthi Ungasisebenzisa kanjani isu lezinhlaka eziningi lapho uhweba i-FX
Kunenani elincane lezindlela ongazisebenzisa ukuhlaziya ubuchwepheshe bemakethe ye-FX. Ungagxila kusakhelo esithile sesikhathi esithile futhi usebenzise izinkomba eziningi zobuchwepheshe kanye nesenzo sekhandlela, ukuzama ukukala ukuqondiswa kwentengo. Ngenye indlela, ungasebenzisa inqubo ye-minimalist ekhululiwe enezinkomba ezimbalwa kakhulu zobuchwepheshe eshadini lakho bese ubheka ukwenziwa kwentengo kumafreyimu amaningi wesikhathi.
Ayikho indlela elungile noma engalungile yokuhlaziywa kobuchwepheshe uma ungafakazela ukuthi indlela yakho: indlela, isu nomkhawulo wakho kuyasebenza. Uma inzuzo yasebhange ngokuqhubekayo futhi ngendlela engaguquki ixhaswa yindlela ephindaphindwayo, khona-ke ukuthi ufike kanjani kuleso simo akunasidingo. Azikho izindlela zokufakazelwa umbhalo-incwadi ezifakiwe zokuhweba i-FX nezinye izimakethe, amasu angawomuntu uqobo, uma kukusebenzela kuzo zonke izimo zemakethe bese uqhubeka. Kodwa-ke, kunezindlela ezithile abahwebi abaningi abanolwazi abazoqhubeka bezincoma, ngakho-ke, ngokwesisekelo sokuhlakanipha kwezixuku kumele kube semthethweni ezindleleni ezithile.
Ukuhlala kukodwa kuhlala kuzinhlobo zonke zokuhlaziywa; abahwebi bafuna ukukhomba ngokuqondile ukuthi inkambiso iqale nini, noma lapho isimo semakethe sesiguqukile. Indlela esisobala kakhulu futhi ekhethekayo ukushaya phansi ngohlaka lwezikhathi ukukhomba isikhathi ngqo lapho lolo shintsho lwenzekile. Ungaba umhwebi oshuthekayo ofakazela ushintsho olwenzeka ngokuziphatha kwamanani eshadini le-4hr, ozobe eseqala ukuhlaziya amafreyitha wesikhathi esingezansi emzameni wokuthola imbangela yoshintsho ngendlela evamile. Ungaba umhwebi wosuku obona ushintsho eshadini le-1hr, ovele ehlelele eshadini lamaminithi amahlanu bese enyukela phezulu kugiya ukuze ahlaziye amafreyimu wesikhathi esiphezulu njengeshadi lansuku zonke, ukuzama ukuthola uma kukhona izimpawu ezisobala zokuhamba kumafreyimu wesikhathi aphakeme naphansi.
Yini okufanele uyibheke
Njengesibonelo, uma ungumthengisi wosuku ofuna ukuthatha isikhathi eside kwezokuphepha njenge-EUR / USD, kufanele ufune ubufakazi bokuthi isenzo sentengo se-bullish sinaso noma sikhona phakathi nezinhlaka eziningi zesikhathi. Lesi senzo sentengo ye-bullish esiboniswe ngamaphethini wamakhandlela sizohluka kumafreyidi wesikhathi ahlukahlukene, ngokuningi njengoba sizoba nokuhluka okucashile. Uhlaka lwesikhathi sezinsuku zonke nohlaka lwesikhathi se-4hr ungabona ubufakazi bokujika ngendlela, ngokwesibonelo, izinhlobo ezahlukahlukene zamakhandlela we-doji adaliwe.
Lezi zibani zamakhandlela zakudala zingakhombisa imakethi efanelekile lapho abathengisi bebala ndawonye izinketho zabo futhi bebheka izikhundla zabo. Amakhandlela we-doji futhi angabonisa ushintsho, kulokhu kungenzeka kube ushintsho kusuka kokungahambi kahle kwe-bearish noma ukuthengiswa kwemakethe emaceleni, kuze kube yilapho isisindo sokuzwela lubangela ukuqondiswa kwentengo kuguqulwe kube yi-bullish.
Kumafreyimu wesikhathi esiphansi kungenzeka ukuthi ufuna iphethini yesibani engaguquki ekhombisa ngokusobala ukuthi intengo ithuthukisa umfutho we-bullish. Lokhu kungaba ngamaphethini wokuphambanisa osemqoka obonwa, noma ungabona ngokucacile isenzo sentengo ngendlela yephethini efana namasosha amhlophe amathathu. Ungahle ubheke inkambiso ye-bearish ephetha ngohlaka oluthile lwesikhathi njengoba kubhalwe phansi izingqimba eziphakeme.
Kusebenza kumthengisi ngamunye ukuzama nokwenza umkhuba ngezikhathi ezahlukahlukene ngokusebenzisa iphrothokholi yokubuyela emuva, ukuthola ukuthi ngabe kuguqukile isimo sokuqonda. Uma ungabona ngokucacile ushintsho kunhlaka yesikhathi ye-1hr kufanele uhlaziye amafreyimu aphezulu nangaphansi ukubona ukuthi ungakhomba amaphethini ahlukahlukene ukusekela umbono wakho. Lapho usukholwa ukuthi unekhono uma usuqalile ukuthuthukisa isici esibalulekile sokuhlaziywa kwamanani entengo yakho, usesimweni esihle sokusebenzisa umbono wakho ezimakethe ezibukhoma.
« Ukwamukela ongakwazi ukukulawula lapho uhweba i-FX kubalulekile entuthukweni yakho Zivikele ngaso sonke isikhathi lapho uhweba i-FX »